Ukuqondisisa Kwamagama Ayingqayizivele Ukugxila Ngomhloli We-Semalt, uNatalika Khachaturyan
Emikhankasweni eminingi ye-SEO, ukusetshenziswa kwamagama angukhiye kungasiza indawo ye-intanethi ibe phezulu kwi injini yokusesha . Noma kunjalo, kunomkhawulo ekusetshenzisweni kwamagama angukhiye, njengoba ukusetshenziswa kwabo ngokweqile kubizwa ngokuthi ukugxilwa kwegama elingukhiye. Ukusetshenziswa okungokwemvelo kwamagama angukhiye kuyisimo se-black hat SEO esetshenziswe emashumini eminyaka adlule. Ngaphandle kwalokho, i-Google ivuselele i-algorithm yawo ye-Penguin ukuze igweme izindlela ezingekho emthethweni njengalezi kanye nokugxilongwa kwegama elingukhiye elingasakwazi ukusiza noma yikuphi isikhundla sewebhu kwi-intanethi. Ngaphezu kwalokho, iSikhali Sokuqukethwe Semalt , uNatalika Khachaturyan, sithi inqubo enjalo ikwandisa ingozi ye-website ukuba ihlupheke ngesigwebo sesimo kanye nokuxoshwa.
Kungani ukufakwa kwegama elingukhiye akulungile
Ukuhambisana kokuqukethwe kuye kwaba yisici esisha se-Google esinikeza kuqala. Ngokugxilongwa kwegama elingukhiye, uvame ukufaka okuqukethwe okuningi okungenzeka noma akufanele kubasebenzisi bakho. Ukubeka amagama angukhiye amaningi kungenza okuqukethwe kwakho kuhlale kungakusizi kulabo ababukeli bakho. Akekho osesho iwebhusayithi ukuze ahlale ekhasini uma okuqukethwe kungasombululi inhloso yabo yokuqala.
Iningi lamabhizinisi alisebenzisi amagama angukhiye asetshenziswayo namuhla ngoba le ndlela ayisekho imali njengendlela yokwenza izinto. Ngaphezu kwalokho, uma okuqukethwe kungabalulekile, isikhathi sokubandakanya kuwebhusayithi yakho siba sihle.
Igama elingukhiye Ukugxila esenzweni
Ukuthola ukusetshenziswa okungokwemvelo kwamanye amagama kukhasi lewebhu kulula. Noma nini lapho usesha noma yimaphi imishwana, amawebhusayithi aphezulu kufanele anikele ngolwazi olufanele. Eminye yezibonelo zabantu abasebenzisa igama lokugxila ngegama elingezansi zihlanganisa:
Amazwi afaka phakathi amagama nezindawo zendawo lapho isayithi lizama ukulinganisa khona..Lawa magama azama ukugaxekile i-SEO search engine ranker.
Izinhlu zezinombolo eziningi zefoni ezingenanzuzo kokuqukethwe noma kwesizinda esiseduze.
Indlela engavamile yokuphindaphinda izitatimende. Isibonelo, "sine-roses ebomvu ngokuhambisana nezidingo zakho ezibomvu ze-rose kulo mbuso obomvu obomvu ku-rose yakho ebomvu. I-roses yethu ebomvu ibomvu nge-roses eminingi. Thola i-rose ebomvu ngokubomvu ukudayiswa kwethu okubomvu kwalawo ma-roses obomvu. "
Indlela yokuthola igama elingukhiye lokugxila?
Enye yezindlela zokukhomba igama eliyisihluthulelo ukufaka izinto ngokubheka okuqukethwe kwewebhu. Ezimweni eziningi, amawebhusayithi anezici eziyisihluthulelo angase aqukethe ulwazi oluningi olungelona ulwazi ngamagama angukhiye. Abanye abakwa-webmasters bavame ukusebenzisa okuqukethwe okufihliwe okufaka amagama angukhiye agxishiwe. Kulokhu, abakwa-webmasters abanjalo bangasebenzisa noma bangasebenzisi ifonti encane, ebonakala embala ofanayo njengombala wangemuva.
Ungagcizelela konke ukuveza amagama angukhiye afihliwe. Ukucindezela ukulawula + Inkinobho ibonisa konke okuqukethwe kwewebhu. Ukudlulisa lokhu okuqukethwe kumbhalo wokucubungula amagama kubalulekile. Abanye abantu bangasebenzisa umbala ogqamile ofanako ngemuva, okwenza ungabonakali.
Kunoma yiliphi ibhizinisi le-e-commerce, ukubeka umkhankaso we-digital marketing ophumelelayo ungaba isu elihle. Amabhizinisi amaningi enza ukuthengiswa okuningi kwi-intanethi usebenzisa izindlela ezifana ne-SEO. Esikhathini esiningi se-SEO sondela, amagama angukhiye ucwaningo kuyindlela ejwayelekile yokuthola amagama angasesha kakhulu okusetshenziselwa kokuqukethwe kwewebhusayithi. Le nqubo yenza isigaba sesayithi sibe phezulu kuma-SERP wale misho ethile. Noma kunjalo, ukusetshenziswa ngokweqile kwegama elingukhiye ekukhohliseni izinjini kungabangela izinhlawulo ezinjenge-deindexation. Abantu kufanele bagweme ukusebenzisa igama elingukhiye ukugxilisa njengendlela yokumaketha yedijithali Source .